NgoLwesithathu, Matshi 31, 2021 NgoLwesithathu, Matshi 31, 2021 Douglas Karr
NgeCodePen, ndakwazi ukuwenza wonke umsebenzi oyimfuneko papasha ikhalityhuleyitha Ndingene kule ndawo. Uninzi lwezinto ezidaliweyo kwiCodePen luluntu kunye nomthombo ovulekileyo. Zizinto eziphilayo abanye abantu kunye noluntu ezinokunxibelelana nazo, ukusuka kwintliziyo elula, ukushiya uluvo, ukwenza ifolokhwe kunye nokutshintsha iimfuno zabo.
NgeCodePen, ungalutshintsha uluvo lwakho ukuba ungathanda ukuba iipaneli zibekho ngasekhohlo, ekunene, okanye ezantsi njengoko usebenza… okanye ujonge i-HTML kwithebhu entsha. Umbono wecala ngecala usebenza ngokumangalisayo ukuvavanya useto lwakho lokuphendula kuba unokuhlengahlengisa ubungakanani bepaneli ebonakalayo.
Unokucwangcisa iskripthi ngasinye esisebenzayo kwiiPeni, uzidibanise kwiiprojekthi (umhleli weefayile ezininzi), okanye nokuba ungakha ingqokelela. Yindawo yokusebenza yeepotifoliyo yekhowudi engaphambili apho unokulandela khona abanye ababhali, ifolokhwe ezinye iiprojekthi ekwabelwana ngazo esidlangalaleni kwezakho ukuba uzitshintshe, kwaye ufunde nokuba ungazonwabisa njani ngokusebenzisa imiceli mngeni.
Ungagcina njengeGitHub Gist, uthumele ngaphandle kwifayile ye-zip, kwaye ngenelo usiba kwinqaku elinje:
Uqikelelo lweMpembelelo yokuThengiswa koPhononongo lwe-Intanethi by Douglas Karr (@iqosweb)
Ndingakukhuthaza ukuba ubhalise. Uya kubhaliselwa kwi-imeyile yabo yeveki kwaye ungongeza ukondla kwi-RSS feed yakho ukuze ubone iipeni ezisandula kupapashwa. Kwaye, ukuba uqala ukukhangela okanye ukhangela iipeni zikawonke-wonke apho, uya kufumana iiprojekthi ezintle ... abasebenzisi banetalente!
landela Douglas Karr kwiCodepen
Inguqulelo ehlawulelweyo, iCodePen Pro, ibonelela ngetoni yamanqaku ongezelelweyo ekusebenzeni okuphuculweyo okanye kumaqela- kubandakanya ukusebenzisana, iinkqubo, ukubamba iiasethi, izimvo zabucala, kunye neeprojekthi ezisasaziweyo kunye nethambeka lakho. Kwaye, ewe, iCodePen ibonelela ngendawo yokugcina ngokudityaniswa kweGithub apho lonke iqela lakho linokusebenza. Ukuba ufuna ukuvavanya ikhowudi elula njengam, iCodePen sisixhobo esixabisekileyo.
Ikhaltyhuleyitha: Qikelela ukuba uVavanyo lwakho olukwi-Intanethi luya kuyichaphazela njani iNtengiso
Umakhi we-URL yeGoogle Uhlalutyo lwe-UTM